Xaaska Madaxweyne Mugaabi oo Shirqool Dil lagu Tuhmay – Balcad.com Teyteyleey
By Abdallah Hassan	 On Oct 7, 2017
Madaxweyne roberta Mugabe ka arimaya dalka Zimbawi halkaa oo ay kajrito nidaam kalitalis dalka mudo dheer soo xakumaye. Mugabe ayaa ah Madaxweynaha ugu cimriga weeyn aduunka kaa lagu qiyaaso dadiisa ineey ku dhowdahay boqol sano
madaxweyn Mugaba ayaa dalka ka ariminaye mud 30 sano ka badan waxaana uu diiday in xilka ka dego. kacdoon ay isku dayeen dadka shacbig ayuu cagta mriye. dowlada ingriiska oo gumeysanjirty dalka Zimbawi ayaa dagaal dhanka siysada lagashay iyad oo damacaday in ka rido xakunk. balse waa ay ku fashilntay sida uu mugaabe maraksto ku hadaaqo marka uu fagaraysha ka hadlayo
Garaca Mugabe xaaska madaxweyn mugaabe ayaa waxaa lagu so eedey shirqool dil oo la damacaday markii la ogdaay in xanuun soo wajahay uu ka dhashay jalaato uu cunay madaxweyanha. jalaatadan ayaa waxaa algu sameey ganacsi ay laheeyd xaaskiisa. inkasto ay dafirtay iska leexisa arinka oo ay ku tilmaantay dacaayad ka dhan.
madaxweyne mugabe ay waxba kamajiran ku tilamay arinka qorshe dil xaaskisa ka dambeeyse yahay. balse dadka waxaa ya isla dhexmaryaan in madaxweynaha uu ka badbaaday shirqool dil. ciidanka sirdoonka aya wada baaritaano ku aadan cida ka damebese shirqoolka dilka ka dhan ah madaxweyne Mugabe
The post Xaaska Madaxweyne Mugaabi oo Shirqool Dil lagu Tuhmay appeared first on Ilwareed Online.
Dameerada oo ay dhibaato caalimi soo foodsartay